Akhriso : Maxaa Ka Dhalan Kara Haddii Uu Mareeykanka Isaga Baxo Soomaaliya – Goobjoog News
in amaanka, Baarlamaanka, Gobalada, online, professional, Top News, Uncategorized, Wararka Dalka, Warbixin Gaar ah
Taliska Mareykanka ee Afrika AFRICOM wuxuu ku socdaa wadadii uu ugala bixi lahaa dhammaan ciidammada Mareykanka ee jooga Soomaaliya ugu dambeyn bisha Janaayo 15, 2021 ee sanadkaan, waxaana halkaas ka istaagi doono howlgalkii dagaal oo ay kula jireen dagaalamayaasha Alshabaab oo dagaal kula jiro dolwadda Somaliya kuwaas oo xiriir la-leh Al-qaaciida.
Bixitaanka degdega ah wuxuu wax u dhimayaa sumcadda Mareykanka kaas oo furaya albaab weyn ku aadan Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha sida ay sheegayaan falanqeyaal arimaha Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump ayaa si deg deg ah ku amray talaabadan, waaxda gaashaandhigana waxay ku dhawaaqday sheekaddaan 4-ta bisha Diseembar, 2020 ee sanadkii tagay.
Ka bixitaanku wuxuu ku soo beegmay xilli ay Soomaaliya ku jirto qalalaase siyaasadeed oo khatar ku ah xasilloonida dawladdii curdanka ahayd ee Soomaaliya. Maamulka soo socda ee Biden waa inuu ka noqdaa go’aankaan uu gaaaray Madaxweynaha kursiga aksii dagaayo ee Mareykanka, oo ay dajiyaan istiraatiijiyad u gaar ah Soomaaliya.
Toban sano ka hor lagaalanka Al-Shabaab waxay ahayd walaaca ugu weyn ee amniga qaranka ee Mareykanka, dowladdii cusubeed ee ku-meel-gaarka aheed ma lahen awood ay wax ku maamusho.
Al-Shabaab waxay maamuli jireen inta badan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo qeeybo kamid ah Caasimadda . Tan iyo markaas, ciidamada Midowga Afrika AMISOM waxay al-Shabaab ka sifeeyeen Muqdisho iyo magaalooyin iyo magaalooyin kale oo badan.
Haddana, sannadihii u dambeeyay waxaa laga arkay horumar yar dhismaha dowlad rayid ah, meelaha qaarkoodna waxaa ka jiray dib u dhac. Mareykanka waa inuu adeegsadaa qaab dowladeed oo dhan si looga caawiyo dowladda soo socota ee Soomaaliya inay horumariso hay’ado lala xisaabtami karo oo hagaajin kara nolosha dadkeeda isla markaana wiiqin kooxda Al-Shabaab.
Hawlgalka adag ee dheelitirka leh ee Mareykanka wuxuu gacan ka geysan karaa go’aaminta in Soomaaliya ay noqoneyso waddan xasilloon oo xasilloon oo adduunka si wanaagsan ula falgala, haddii hoggaanka xiga ee Soomaaliya uu muujiyo sida ay uga go’an tahay horumarka, markaa Mareykanka waa inuu ka caawiyaa sidii uu u guuleysan lahaa.
Aragtida ama maqaalka lagu muujiyey qodobkaan waxaa qoray Stephen M. Schwartz oo ahaay safiirkii ugu horeey Mareykanka ee Soomaaliya, waxayna ku wajahan tahay siyaasadda arrimaha dibedda Mareykanka iyo amniga qaranka.